Bogga ugu weyn Adeegyada Mushaharka Ganacsi ee ugu Fiican - Lacag -bixinta Shaqaalaha ayaa la fududeeyay
Mushaharka mushaharka ayaa la dhihi karaa waa kharashka ugu weyn ee ganacsiga, maareyntiisuna waxay noqon kartaa hawl culus. Habsocodku wuxuu noqon karaa mid waqti qaadanaya khaladaadkuna waxay u horseedi karaan qanacsanaan iyo ganaaxyo, laakiin adeegyada mushaharka ganacsiga waxaad shaqada u fududaynaysaa.
Adeegani wuxuu qabtaa dhammaan habaynta mushahar bixinta shirkadda iyo sidoo kale canshuur celinta dakhliga iyo lacagaha la xiriira.
Iyada oo la kala dooranayo sannadka 2021 -ka, way adkaan kartaa in la helo adeeg daboolaya baahiyahaaga, sidaa darteed waxaan baarnay oo aan la nimid shirkadaha mushaharka ugu sarreeya si ay kaaga caawiyaan sidii aad ugu habboonaan lahayd ganacsigaaga. Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato adeegyada mushahar bixinta, waxaad arki kartaa tilmaamahayaga ku saabsan doorashada adeegga mushaharka.
Mushahar bixinta waa liiska shaqaalaha shirkadda iyo xaddiga lacagta ay helaan. Waa nidaam ay shirkaddu isticmaasho si ay u diiwaangeliso mushaharka (iyo mushaharka), u siiso shaqaalaha, ulana socoto lacagaha.
Waxa laga raadinayo adeegyada mushaharka meheradda
Kahor intaadan raadin adeegyada habaynta mushaharka, waa inaad marka hore go'aamisaa astaamaha adiga kuugu muhiimsan. Waa kuwan dhowr arrimood oo la tixgelinayo:
Astaamaha la bixiyo
In kasta oo bixiyayaasha adeegga mushaharka badankoodu ay bixiyaan adeeg la mid ah, mararka qaarkood adeeggan waxaa laga yaabaa in lagu daro qiimaha aasaasiga ah, halka xaaladaha kale adeeggan lagu heli karo lacag dheeraad ah.
Awoodda HR waxay waxtar u yeelan kartaa ganacsi yar oo aan lahayn shaqaale HR oo u heellan, laakiin awoodaha HR ma lagu daray qiimaha mise waa inaad lacag dheeraad ah ku bixisaa?
Qaar ka mid ah shirkadaha mushahar bixinta ayaa bixiya xirmooyin badan, oo leh astaamo qaarkood oo keliya qorshayaasha qaaliga ah, markaa hubso inaad taas maanka ku hayso markaad raadinayso bixiyeyaasha adeegga mushaharka.
Ganacsi yar milkiilayaashu waa inay xirtaan koofiyado badan badanaana ma haystaan ​​waqti ama rabitaan ay ku bartaan codsiyada softiweerka ee adag.
Kahor intaadan ka iibsan arjiga mushaharka ee meheraddaada mid kasta oo ka mid ah adeegyada mushahar bixinta meheradda, hubso in badeecaddu ay fududahay in la isticmaalo oo kor loo qaado isla markaana aan la bilaabin.
Maxaa ganacsigaagu bixin karaa? Waan ognahay in awood -u -heliddu tahay mid shakhsiyeed. In kasta oo inta badan bixiyeyaasha adeegga mushaharka ee liiskan ku jira qiimo isku mid ah, codsiyada qaarkood waxaa ka mid ah hawlgal buuxa. Qaar kale waxay bixiyaan qorshaha asaasiga ah, oo leh ikhtiyaarka ah in lagu daro shaqeynta dheeraadka ah lacag dheeraad ah.
Waxyaabaha kale ee maskaxda lagu hayo ayaa ah in iyadoo sicirka salka laga yaabo inuu ka sarreeyo barnaamijyada qaar, haddana dhab ahaantii way ka raqiisan tahay haddii dhammaan astaamaha lagu daro sicirka salka.
Helitaanka maaraynta faa'iidooyinka
Haddii aad u fidinayso macaashka shaqaalahaaga, waxaad u baahan doontaa inaad hesho marinnada maaraynta faa'iidooyinka sidoo kale. Tan waxaa ku jiri kara maaraynta faa'iidooyinka caadiga ah iyo sidoo kale helitaanka caafimaad la awoodi karo, nolosha, iyo naafanimada caymiska qorshooyinka.
XIDHIIDHKA: Lacag ku Bixi Sigaar -cabista: Samee In ka badan $ 5000/bishii 2022
Intaa waxaa dheer, haddii aad hadda bixiso dheefaha sida caymiska nolosha kooxda in ka badan $ 50,000, isticmaalka baabuur khaas ah, kaalmo shaqaale, ama xubin ka noqoshada jimicsiga, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ku darto qiimo macaashkaan dakhli ahaan. Hubi in waaxda mushaharkaagu bixiso ikhtiyaarkan.
Liiska Adeegyada Mushaharka Ganacsi ee ugu Fiican
Mushaarka tooska ah ee QuickBooks
Paychex waa adeeg mushahar oo dhammaystiran oo daryeela habaynta mushaharka iyo waajibaadka cashuurta. Shirkaddu waxay bixisaa jadwalka lacag -bixinta dabacsan, oo leh toddobaadle, laba -toddobaadle, nus -sannadeed, iyo ikhtiyaarro bille ah. Paychex wuxuu kaloo xamili karaa dhammaan noocyada shaqaalaha, oo ay ku jiraan shaqaalaha W-2 ee waqti-dhiman, 1,099 qandaraasleyaal, iyo kuwa iskood u shaqeysta.
Paychex waxay kaloo bixisaa dhowr hab oo lacag -bixin ah, oo ay ku jiraan deebaaji toos ah, jeegag waraaqo ah, iyo kaararka deynta ee la sii bixiyay. Hab kasta oo lacag -bixin ah oo meheraddaadu ku isticmaasho Paychex waa la sumadeyn karaa, iyadoo meheraddaada la gelinaayo iibiyeha ama dhinac kale oo aad bixinayso.
Paychex waa nidaam lagu martigaliyay daruuraha, sidaa darteed adeegsadayaashu waxay ku geli karaan internetka. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa app -ka moobaylka Paychex si aad ugu maamusho mushaharkaaga macruufka kasta ama aaladda Android.
Adeegsiga Paychex waa u sahlan tahay gelinta macluumaadka mushaharka (sida mushaharka, saacadaha la shaqeeyay, iyo sicirka mushaharka) iyo soo gudbinta mushaharka si loo hawlgalo. Paychex waxay kaloo bixisaa is-adeegsi shaqaale, oo u oggolaanaya shaqaalaha inay galaan nidaamka oo ay arkaan mushaharkooda dhammaadka sannadka iyo dukumintiga canshuurta.
Paychex waxay bixisaa xirmooyin qiimayn oo dhowr ah si ay ugu habboonaato meheradaha cabbirkooda iyo baahidoodaba. Qiimaha xirmo kasta wuxuu ku salaysan yahay baahiyahaaga gaarka ah.
OnPay waa xulashada koowaad ee Blueprint ee adeegyada mushahar bixinta meheradda yar oo leh sabab wanaagsan. In kasta oo loogu talagalay ganacsiyada yaryar, OnPay waxay u fidin kartaa si aan kala go 'lahayn si ay u dejiso xitaa meheradaha dhexdhexaadka ah.
Iyada oo la adeegsanayo nidaamka sahlan, OnPay waxay siisaa astaamo u gaar ah warshadaha makhaayadaha iyo meheradaha kale ee u baahan inay tixgeliyaan talooyinka shaqaalaha.
Qorshaha OnPay waxaa kale oo ka mid ah wareegyada lacag-bixinta aan xadidnayn, marin-u-helidda moobiilka oo ka socota aalad kasta, deebaaji toos ah iyo kartida mushahar bixinta dalal badan, iyo sidoo kale is-adeegsiga shaqaalaha iyo kartida saaran.
OnPay waxay bixisaa qorshe hal-mar ah, oo lagu qiimeeyo qorshaha socda $ 36/bishii, oo lagu daray guddi $ 4 ah oo shaqaale ah. Dhammaan sifooyinka, oo ay ku jiraan kheyraadka aadanaha iyo xulashooyinka taageerada buuxda, ayaa lagu daray qiimaha.
#3. Mushaarka tooska ah ee QuickBooks
Adeeggan Mushahar bixinta meheradda waxaa loogu talagalay in lagu dhex daro QuickBooks Online Accounting. Waxaa sidoo kale loo adeegsadaa sida codsi softiweer mushaharka keligiis ah.
XIDHIIDHKA: 10ka App ee ugu Wanaagsan ee Kahadalka hurdada 2022| Hagaha ugu Fiican
Muuqaalka Lacag -bixinta ee QuickBooks Online wuxuu qaadaa ilaa 50 shaqaale ah, laakiin heerar kala duwan oo qiimeyn ah awgood, waxaa aad ugu jaban ganacsiyada leh 15 shaqaale ama ka yar.
Mushaharka tooska ah ee QuickBooks wuxuu ka bilaabmaa $ 22.50/bishii, oo leh qorshayaasha Premium ee $ 37.50/bishii iyo qorshayaasha Elite oo ah $ 62.50/bishii. Qiimayaasha oo dhami waxay ka tarjumayaan bilowgii 50% dhimistii saddexda bilood ee ugu horraysay, iyada oo shaqaale kasta lagu daray $ 4 oo lagu daray qiimaha saldhigga ah.
Deluxe waxay bixisaa adeeg mushaar bixin oo buuxa oo ay taageerayaan koox taageero macaamiisha u heellan oo fududeyn karta oo hagaajin karta nidaamkaaga. Waxay ilaalinaysaa dhammaan hirgelinta iyo qaabaynta, ka qaadista culayska ganacsigaaga oo hubinaysa in si sax ah loo qabtay.
Deluxe kaliya waxay bixisaa qiimayaal shaqsiyeed waxayna u baahan tahay la -tashiga iibiyaha. Marka laga reebo softiweerka mushaharka ee khadka tooska ah, Deluxe waxay bixisaa koox taageero macmiil si ay kuu caawiso mar kasta oo aad u baahato. Kooxdani waxay u heellan tahay koontadaada, si ay u ogaadaan ganacsigaaga iyo baahidiisa gudaha iyo dibaddaba, iyagoo kaa caawinaya hagaajinta mushaharkaaga iyo inaad gaarto hufnaan dheeraad ah.
Gusto wuxuu ugu fiican yahay ganacsiyada yaryar wuxuuna ku fiican yahay kuwa ku jira warshadaha hoteelka. Waxay bixisaa qalab iyo agabyo sahlaya in lala socdo mushaharka iyo heerarka tilmaamaha ee kala duwan. Adeeggan ayaa sidoo kale ka caawiya dadka cusub habka geedi -socodka dejinta mushaharka bilowga ah, si aad si dhaqso leh u kici karto.
Bixinta hab-socodka nidaamka fudud, Gusto waxaa ku jira warbixinnada shaqaalaha cusub, jadwalka lacag-bixinta dabacsan, fulinta aan xadidnayn, bixinta qandaraaslayaasha, iyo awooda mushahar bixinta ee dalal badan. Waxaad adeeggan ka heli kartaa qalab kasta.
App -ka sidoo kale waxaa ku jira jihaynta shaqaalaha, canshuur celin buuxda, iyo xawaaladaha. Gusto wuxuu kaloo bixiyaa kheyraadka HR, laakiin kaliya xirmada ugu qaalisan.
Muuqaalka Autopilot waa doorasho weyn oo loogu talagalay shirkadaha bixiya xaddi badan oo shaqaale mushahar fiican leh. Gusto wuxuu bixiyaa ikhtiyaarro is-dhexgal oo wanaagsan oo leh codsiyo dhinac saddexaad ah oo kala duwan.
Gusto wuxuu bixiyaa afar baakad: Aasaas, oo loogu talagalay hal ama laba shaqaale; Core, oo ku habboon ganacsiyada yaryar; Dhammaystiran, waxtar u leh ganacsiyada koraya; iyo Concierge, oo aad ugu habboon shirkadaha waaweyn ee leh baahiyaha shaqaalaha.
Qorshaha Aasaasiga ah ee Gusto waxa uu leeyahay qiimihiisu saldhiga u ah $19 bishii, iyada oo ay la socdaan $6 shaqaale kasta. Qiimaha aasaasiga ah ee qorshaha Core waa $39/bishii iyadoo la ururinayo $6 shaqaalihiiba. Wadarta qiimaha waa $39 bishii, oo lagu daray $12 qof shaqaale ah, iyo khidmad Concierge ah $149 bishii, oo lagu daray komishanka $12 shaqaalihiiba.
SurePayroll waxay ku fiican tahay milkiilayaasha ganacsiga yaryar waxaana ku jira nooc gaar ah kuwa bixiya kharashka shaqaalaha guriga. Ku habboon ganacsiyada yaryar ee leh 10 shaqaale ama ka yar. SurePayroll waxa ay ka shaqeysay in ay si otomaatig ah u sameyso dhammaan habka mushaar bixinta – faa’iido muhim ah oo loogu talagalay ganacsatada aadka u shaqeysata.
Muuqaalka hordhaca mushaharka SurePayroll wuxuu muujinayaa mushaharka guud, jarista shaqaalaha, iyo canshuuraha qof walba.
SurePayroll waxaa ku jira warbixin horudhac ah oo ku saabsan mushaharka. Xigasho: SurePayroll software.
SurePayroll waxay bixisaa deebaaji toos ah, warbixinno ku saabsan shaqaale cusub, iyo raadinta waqtiga iyo imaanshaha. App -ka sidoo kale waxaa ku jira xawilaad lacageed oo dhammaystiran iyo canshuur celin, oo leh barnaamij moobil oo loo heli karo aaladaha macruufka iyo Android.
Ikhtiyaarada is-adeegsiga ee shaqaalaha ayaa sidoo kale la heli karaa, SurePayroll ayaa sidoo kale lagu daray codsiyo dhinac saddexaad ah oo kala duwan.
SurePayroll waxa ay bixisaa dashboard-ka mushaharka-fudud ee lagu socon karo kaas oo siinaya gelitaanka dhammaan sifooyinka mushahar bixinta. Appkan waxa uu fududeeyay habka gelitaanka mushaharka isaga oo yareeyay tirada xogta loo baahan yahay. Doorashada AutoPayroll ayaa sidoo kale diyaar u ah shaqaalaha.
SurePayroll waxay bixisaa laba baakad: Is-adeegsi, oo ka reeban xaraynta iyo xaraynta canshuurta dakhliga, iyo Adeeg buuxa, oo ay ku jirto muddada ka shaqaynta mushaharka laba maalmood, iyo sidoo kale helitaanka ilaha. Boodhadhka HR iyo u hoggaansanaanta.
Qorshaha iskaa-u-adeeggu wuxuu ku kacayaa $ 19.99/bishii oo lagu daray guddi $ 4 halkii shaqaale ah, halka qorshaha adeegga buuxa uu yahay $ 29.99/bishii, oo lagu daray guddi $ 5 halkii shaqaale ah.
#7. Saaxiibka Mushaharka
Payroll Mate's Real Business Solutions waxay bixisaa codsi mushahar oo la awoodi karo. Waxay ku habboon tahay ganacsiyada yaryar ee doorbida arjiga goobta. Adeeggan waxaa loo adeegsadaa nidaamka hawlgalka Windows. Ma bixiso gelitaan onlayn ah, in kasta oo aad ku marti qaadi karto alaabta server fog haddii aad rabto.
Fasaxa Mate Mate iyo Saacadaha Jirku waxay leeyihiin qaybo si ay u muujiyaan sida shaqaaluhu u kasbadaan saacaddooda.
Waxaad ku hagaajin kartaa goobaha fasaxa iyo jirrada ee Payroll Mate.
Payroll Mate waa mid ku habboon ganacsiyada leh wax ka yar 75 shaqaale. Sidoo kale waa ikhtiyaar wanaagsan xisaabiyeyaasha inay ka baaraandegaan mushaharka macaamiishooda. Xulasho wanaagsan oo loogu talagalay meheradaha yaryar oo leh meelo badan. Payroll Mate wuxuu kaloo taageeraa tirooyin badan oo lacag bixin ah, hawlgallo aan xad lahayn, iyo mushaharka dalal badan.
Akhri ALSO: 27 Shirkadood ee Bixinta Mushaharka ugu Fiican Sanadka 2022 | Hagaha Khabiirka
Halkii aad ku dhibtoon lahayd nidaamyada gacanta oo isku dayaya inaad ogaato sida loo sameeyo mushahar bixinta, waxaad dooran kartaa adeegga mushaharka oo fududaynaya habka mushaharka oo dhan. Waxaad ka dooran kartaa liiskayaga adeegyada mushahar bixinta ganacsiga oo ay bixiyaan shirkado kala duwan.
Waxaad kaloo baran kartaa Sida Lacagta Looga Wareejiyo Kaarka Mushaharka Loogu Wareejiyo Koontada Bangiga.
Waxay Ka Shaqaysaa Faallooyinka 2022: Alaabada | Saxiixyada | Xalaal Mise Fadeexad?
10ka Guri ee ugu Qaalisan Beverly Hills
Iibsashada hantida ma-guurtada ah ee Beverly Hills waa hawl aad qaali u ah, maadaama inta badan kuwa la heli karo ay noqon karaan…
15 Kaararka Amaahda Ugu Fiican ee Badbaadada Loogu Talagalay Deynta Xun 2022
Haddii aad qorsheyneyso inaad hesho amaah dugsi, iibsato guri, ama kiraysato baabuur, deyn togan…